को–को आए सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको नेतृत्वमा ? ( हेर्नुहोस् नामसहित) « Surya Khabar
को–को आए सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको नेतृत्वमा ? ( हेर्नुहोस् नामसहित)
काठमाण्डौ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (अकोराब) का अध्यक्षमा सुवास खतिवडा निर्वाचित भएका छन् । यहाँ सम्पन्न सङ्घको १२ औँ साधारणसभा तथा छैटौँ अधिवेशनबाट २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिसहित खतिवडा तीन वर्षीय कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् ।
उनी एक सय ४२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका सदस्य नेत्र केसीले जानकारी दिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी किशोरजङ्ग थापाले एक सय ३२ मत ल्याउएका थिए । कुल दुई सय ८७ मतदातामध्ये दुई सय ७६ जनाले मतदान गरेका थिए ।
यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्जुन गिरी, उपाध्यक्ष (महिला)मा शशीकला दाहाल, उपाध्यक्ष (मधेस)मा निमेष कर्ण र उपाध्यक्ष (जनजाति)मा अर्जुनकुमार राई विजय भएका छन् । सङ्घका महासचिवमा गोविन्द देवकोटा, सचिवमा वन्दना दनुवार र कोषाध्यक्षमा लक्ष्मण खड्का निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै सात प्रदेश समितिका अध्यक्षका क्रमशः बच्चुनारायण विक, अशोक दत्त, कृष्णहरि घिमिरे, शान्ति गुरुङ, केपी घिमिरे, रमेशकुमार गौतम र नरेन्द्रप्रसाद भट्ट निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेश अध्यक्ष सङ्घको कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । ।अधिवेशनको शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले उद्घाटन गरेका थिए ।